Natao Fahirano Vetivety ny Tanànan’i Jeriko dia Resy
HAMAKY AMIN'NY TENY Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Armenianina (Andrefana) Aymara Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Bengali Bichlamar Bicol Boligara Catalan Cebuano Chichewa Chitonga (Malawi) Chitumbuka Cinghalais Danoà Drehu Efik Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Frantsay Goujrati Goun Grika Guarani Géorgien Haoussa Hebreo Hiligaynon Hindi Hiri Motu Holandey Hongroà Ibo Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Isoko Italianina Japoney Kannada Kantôney Nentim-paharazana Kazakh Kikamba Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Koreanina Kreôla any Haïti Kroaty Letonianina Litoanianina Luganda Luo Malagasy Malayalam Malezianina Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Marathe Masedonianina Maya Mixe (Afovoany) Mongol Norvezianina Népali Oromo Ossète Ourdou Ouzbek Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Pendjabi Persianina Pidgin any Amin'ny Nosy Salomon Poloney Portogey (Brezila) Quechua (Bolivia) Romanianina Rosianina Samoanina Sango Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Shona Sinoa Kantôney Notsorina Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Tagalog Tailandey Tajiki Tamoul Tatar Tchouvache Tigrigna Tiorka Tiv Tok Pisin Tseky Turkmène Turkmène (Sirilika) Tuvalu Tzotzil Télougou Vietnamianina Wallis Waray-Waray Wolaita Yorobà Zapoteky (Andilan-tany)
Inona no manaporofo fa natao fahirano vetivety fotsiny ny tanànan’i Jeriko dia resy?
Milaza ny Josoa 6:10-15, 20 fa nanao fahirano an’i Jeriko ny miaramila israelita, ka nihodidina azy indray mandeha isan’andro nandritra ny enina andro. Nihodidina an’ilay tanàna impito kosa izy ireo ny andro fahafito, ary narodan’Andriamanitra ilay manda mijoalajoala nanodidina an’i Jeriko. Tafiditra àry ny Israelita ary resy ilay tanàna. Misy zavatra hitan’ny mpikaroka ve manaporofo fa marina ilay voalazan’ny Baiboly hoe vetivety fotsiny no nanaovana fahirano an’i Jeriko?
Fanaon’ny miaramila fahiny ny manao fahirano an’izay tanàna voaro mafy tiany hotafihina. Rehefa resin’izy ireo ilay tanàna, dia alainy ny zava-tsarobidy ao, anisan’izany ny sakafo tsy lanin’ny mponina nandritra an’ilay fahirano. Nahita sakafo be dia be tao amin’ny sisa tavela amin’ny tanànan’i Jeriko anefa ny mpikaroka. Milaza ny gazety Ny Arkeolojia sy ny Baiboly (anglisy) fa tsy fahita izany tany amin’ny tanàna hafa nisy nanao fahirano, tany Palestina. Hoy ihany io gazety io: “Voamadinika no tena betsaka tao [Jeriko], ankoatra ny zavatra vita tamin’ny tanimanga. ... Mety ho nisy voamadinika iray na roa siny tavela ihany [tany amin’ny tanàna hafa], nefa tsy fahita ny voamadinika be dia be toy izany.”
Milaza ny Baiboly fa tsy nalain’ny Israelita ny sakafo tao Jeriko, satria tsy navelan’i Jehovah hanao an’izany izy ireo. (Jos. 6:17, 18) Mbola be voamadinika tao, satria volana Martsa na Aprily ny Israelita no nanafika an’ilay tanàna, izany hoe taoriana kelin’ny fotoam-pijinjana. (Jos. 3:15-17; 5:10) Vetivety àry no nanaovana fahirano an’i Jeriko, matoa be dia be ny voamadinika tavela tao. Marina tokoa ny voalazan’ny Baiboly.
Fanontanian’ny Mpamaky, Novambra 2015
Soratra Fandikana boky NY TILIKAMBO FIAMBENANA—FIANARANA Novambra 2015